Momba anay - Yueqing Aiso Electric Co., Ltd.
Mpamatsy fitaovana elektrika tsara indrindra anao
AISO Electric dia mpamatsy fitaovana elektrika fanondranana. Ny vokatra fanondranana dia ahitana: Andian-tsarimihetsika feno set, fitaovana elektrika misy herinaratra avo lenta, fitaovana elektrika malefaka ambany ary mpanova. Manana orinasa 3 izahay, ny vokatra rehetra dia novokarina nifanaraka tamin'ny fenitra ISO9001 sy CE.
Ny orinasa dia manana traikefa fanondranana maherin'ny 10 taona, ary efa namidy tany amin'ny firenena 50 mahery. Vokatra maro no nampiasaina nandritra ny 10 taona mahery ary noraisin'ny mpanjifa tsara.
Hanohy hanatsara ny fizotry ny famokarana sy ny matihanina amin'ny serivisy izahay mba hanomezana vokatra sy serivisy tsara kokoa.
1. Ny kalitao no voalohany, ny kolontsainay.
2. "Miaraka aminay ny volanao azo antoka" famerenam-bola feno raha misy ratsy tsy mifanaraka amin'ny fepetra teknika na fanemorana ny fotoana fandefasana.
3. "Ny fotoana dia volamena" ho anao sy ho antsika, manana asa ekipa matihanina afaka manatsara ny fahamendrehana ao anatin'ny fotoana fohy isika.
Manana traikefa manan-karena amin'ny famokarana sy ny varotra izahay, manokana amin'ny famokarana mpamatsy fitaovana elektrika avo lenta sy ambany. Ankoatr'izay, manana tombony tsara amin'ny toerana misy anay izahay, ary ny ankamaroan'ny mpamokatra dia manana fifandraisana akaiky kokoa, afaka manome vokatra elektrika hafa ianao, ary araka ny araka ny filanao, vokatra namboarina Ny orinasam-pivarotana miitatra, ny mpanjifa manerana ny worid, manana laza tsara hahazoana ny fitokisan'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany, hampiroborobo ny fanavaozana ny firenentsika, hampiroborobo ny fifanakalozana ara-toekarena sy ara-teknolojia manerantany, hanatsara ny fisakaizana ny olona amin'ny firenena rehetra dia manao asa tsara be dia be. Manantena mafy izahay fa hiara-miasa ianao sy ny 1 hamorona. Ho avy tsaratsara kokoa!